Guddoomiye ku-xigeennada Amniga ee degmooyinka oo loo soo xiray tababar “SAWIRRO” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Muqdisho (SONNA)- Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa tababar u soo xiray Guddoomiye ku-xigeennada Amniga iyo Siyaasadda ee degmooyinka Gobolka Banaadir iyo qaar ka tirsan Agaasimayasha qaybta Amniga iyo Arimaha Bulshada.
Tababarkan oo muddo labo cisho ah socday laguna qabtay aqalka dowlada hoose ee Xamar ayaa ka qeyb galayaasha waxa ay qaateen casharo la xiriira xoojinta maamul wanaaga, kor u qaadista wada shaqeyn dhexmarta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa dhanka amniga.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti ayaa ku bogaadisay xubnihii tababarka ka faa’iideystay inay la wadaagaan bulshada ay hogaanka u yihiin oo ay ku dhaqmaan waxyaabaha ay barteen ee ah xoojinta iyo wadashaqeynta kala dhexeysa maamulkooda.
Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo tababarka soo xiray ayaa tilmaamay in Guddoomiye ku-xigeennada amniga ee degmooyinka Gobolka ay lafdhabar u yihiin shaqoyinka lagu xoojinayo horumarka caasimadda, ayna ka shaqeeyaan isku-xirka degmada iyo ciidanka ilaalada degmada.
Ugu dambeyn mas’uuliyiintii tababarka loo soo xiray ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyin ka turjumeysa waxyaabaha ay barteen.